कांग्रेस गाँउपालिका अध्यक्षले पाल्पामा गरे शैक्षिक कर्जाकाे सुरूवात - edChitwan
कांग्रेस गाँउपालिका अध्यक्षले पाल्पामा गरे शैक्षिक कर्जाकाे सुरूवात
के तपाई शैक्षिक वेरोजगार हुनुहुन्छ ? वा पैसा नभएर केही गर्न पाउनु भएको छैन ? उसो भए अब चिन्ता नलिनुस् । किनकी सरकारले शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर धितो दिने व्यवस्था गरेको छ । यसकाे सुरूवात पाल्पा बाट सुरू भइसकेकाे छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेकाे थियाे । त्यसै कार्यक्रमलाइ सफल बनाउन पाल्पामा शैक्षिक कर्जा सुरूवात भएकाे छ । पाल्पाकाे बङनासकाली गाँउपालीकामा समुहमा अाउने युवा तथा विधार्थीलार्इ ५ लाख सम्म शैक्षिक प्रमाणपत्रको कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो । । दुइ बर्ष सम्म बिना धिताे यस्ताे व्यावस्था गरिएकाे बङनासकालीका अभ्यक्ष कृषन प्रसाद बस्यालले जानकारी गराए। उनि कांग्रेसका तर्फ बाट गत चुनावमा निर्बाचित भएका हुन ।